Soo degsasho qiimo leh oo loogu talagalay Isticmaalayaasha GIS - Geofumadas
Disember, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Halkan waxaa ah liistada soo degsashada oo inta badan waxtar badan u leh isticmaaleyaasha barnaamijyada CAD / GIS. Qaar ka mid ah looma heli karo noocyadii ugu dambeeyay, laakiin wali waa tixraac waana mudan tahay in isha lagu hayo cusbooneysiintooda.
Qalab bilaash ah oo akhriska iyo daabacaadda faylasha AutoCAD ee qaabka qaabka xNUMX iyo 2.
Qalabka lagu hagaajinayo waxsoosaarka horumarinta ESRI iyo isticmaalayaasha, oo ku yaalla ArcView, ArcEditor iyo ArcInfo.
Qalabka ay sameeyeen khabiirada Barr
DXF2XYZ wuxuu u rogaa fx dxf si qoraal ah oo la xaddiday oo leh xyz ah xyz.
Korontada la adeegsado ee tarjumaysa ArcInfo ama ArcCAD shaqooyinka 7x, ama dib u eeg.
Inlas Geo Waraaqaha Daabacaadda
Waxay isku-dubbaridaan saldhiga Atlas GIS-ga ee loo yaqaan "ESRI"
TNTatlas V6.20Windows Cusbooneysiin Bixiyeyaasha
Abaabulaan, u qeybiyaan oo u muujiyaan macluumaadka qeexan jawiga Atlas.
Faylasha Kheyraadka Tarjumaada
Wuxuu ka tarjumayaa xogta laga soo galo khadka TNT si loogu muujiyo degaanka
CelestNav waa xisaabiyaha wareega oo ay ku jiraan almanac badeed ... weligiis cagaaran. Waxay ku shaqaysaa PalmOS.
M / IX 3.0 ee Windows
Isbedelka kombuyuutarka wuxuu u beddelaa kumbuyuutar-u eg, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa adeegyo loogu talagalay kombiyuutarada macaamiisha ee gudaha intranet ... ama dibadda?
Qoraallada qiimaha leh ee SML.
Mashruuca HCV / Hubka Hydrogada, Hagaha Tilmaamaha Gaariga On-line
Buug-gacmeedka, software-ka iyo khayraadka galka Grass
Qalab bilaash ah oo loogu talagalay oo lagu fuliyo hawlaha aasaasiga ah ee alaabooyinka ESRI
Kordhinta Degmooyinka ArcView GIS
Dhaqannada iyo kordhinta dhismayaasha degmada, falanqaynta cinwaanka iyo qorsheynta haddii faa "iidada laga faa'iidaysto ay gacan ka geysan karto geeddi-socodka wareegga.
Isku bedel HPGL iyo HP-GL / 2. Qalabka iyo faylasha DXF faylasha
Faa'iidada loogu talagalay dadka isticmaala ArcView ee kaydka si toos ah, marwalba inta badan ... aad u fiican haddii aan haysano Arcview version oo inta badan burburo. 🙂
Waxay u oggolaaneysaa in lagu soo bandhigo xogta laga helo dareemayaasha fog sida Landsat, Spot, Radarsat, ERS-1, Noaa Avhrr ama alaabooyinka ugu dambeeya sida sawirrada dayax gacmeedka ama orthophotos. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa in lagu muujiyo lakabyada GIS ee qaababka caadiga ah, waxa ugu fiican ee ay leedahay ayaa ah inay dib u canaanan karto faylasha leyenco oo ka badan 80 qaabab raster / vector oo duulimaad ah
NAPIS waxay isku xireysaa nidaamka macluumaadka juqraafiyeed (GIS) iyada oo la adeegsanayo Qalabka Map Map, taas oo u oggolaanaysa xogta qoraalka ah in ay la xiriirto qaababka qeexaya khariiradaha kombiyuutarka ku salaysan.
Qalabka lagu kordhinayo wax soo saarka qaar ka mid ah howlaha guud ee AutoCAD ee aagagga khariidaynta, sahaminta, madaniga iyo GIS. In kasta oo ay gadaal la jaan qaadi karto, haddana waxaa habboon in isha lagu hayo cusboonaysiinteeda.
Ereyga Cilmi-baarista Erayga Calaamadda ee Unix v1.0
Wizard ee falanqaynta xogta ER Mapper, sidoo kale diyaar u ah PC
Ma kuu sheegaysaa dadka kale?
Post Previous" Hore Qoraallada xisaabinta adag
Post Next Hab fudud oo lagu baro (iyo waxbarto) AutoCADNext »